Soo dejisan ePSXe 2.0.5 – Vessoft
Qeybta: Imtixaanka ciyaaraha
Bogga rasmiga ah: ePSXe
ePSXe – software ah inuu u ciyaaro codsiga of Console ciyaarta PlayStation Sony on your computer. ePSXe kuu ogolaanayaa inaad maamusho CD-yada ee Console ciyaarta iyo sanamyadooda in lagu kaydiyaa drive ka adag. Software waxa uu isticmaalaa daro iyo modules badan in loo maqli karo kulan ee xaaladaha maximally u dhow ciyaarta ku Console a yihiin. ePSXe kuu ogolaanaya in aad si loo badbaadiyo ama shuban kulan ka mid ah jarida iyo isticmaali khiyaameeya kala duwan ee maris fudud of kulan. EPSXe kale oo ku jira qalab reserved ka ilaaliyaal iyo furayaal gacanta ku keyboard ah.
Tayada sare ee dega Khayaadka oo kulan
Saxanno ciyaarta Orod oo images disc
Daro iyo modules badan oo
Qalabka reserved ilaaliyaal
Soo dejisan ePSXe
Faallo ku saabsan ePSXe
ePSXe Xirfadaha la xiriira
Mid ka mid ah emulators keentay ciyaarta PlayStation qaadan karo Console ah. Software wuxuu taageeraa kulan badan iyo maamulka adeegga Network PlayStation ah.
AutoHotkey – aalad loogu talagalay in lagu habeeyo digaagga kulul. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kormeerato furaha furaha ah ee keyboard-ka, dhaqdhaqaaqa jiirka iyo shaqada aaladaha kale ee kontaroolada.
GPU-Z – softiweer si ay u ururiso macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan kaarka fiidiyowga, processor, kaarka garaafyada iyo qaybaha kale. Softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu arko oo tijaabiyo xarkaha processor-ka sawirka.
MP3Gain – softiweer si kor loogu qaado mugga MP3-files. Softiweerku wuxuu ka koobanyahay cutubka falanqaynta ee mugga faylasha maqalka si loo go’aamiyo tayada codka ugu fiican ee maqalka aadanaha.
Cool Reader – waa aalad ku habboon in lagu akhriyo buugaagta elektiroonigga ah. Software-ka wuxuu taageeraa qaababka caanka ah, wuxuu la shaqeeyaa faylasha, waxaana ku jira muujinta dhageysiga buugaagta.